Kungani Abantu Babhala Ukubuyekezwa Kwe-inthanethi? | Martech Zone
Uma ungacabangi ukuthi ukubuyekezwa okuku-inthanethi kuyinto enkulu… vele ubheke amaklayenti ethu, Uhlu luka-Angie, manje oluyinkampani yomphakathi ngokuqinile olususelwe kuhlu olukhulu lwemininingwane esezingeni ukubuyekeza okuthembekile. Futhi iqiniso lokuthi abavumeli ukubuyekezwa noma ukubuyekezwa okungaziwa ngamalungu angakhokhi kugcina ama-troll kanye nabakhohlisi ukuthola okuhlangenwe nakho okuhle. Amakhasimende abo ayabathanda… vele ubabuze.
Muva nje, kubukeka sengathi abathengi abaningi ngokwengeziwe bathutheleka kumasayithi abukeza online, izinkundla nezinhlelo zokusebenza ukwabelana ngemibono yabo ngezinsizakalo abazitholile. Kepha njengoba kuvela, akuwona wonke umuntu oqhutshwa ngamaphoyinti noma amahhala kuphela.
Uma uyinkampani, ikakhulukazi eyasendaweni, futhi awuqapheli idumela lakho ku-inthanethi ngezibuyekezo - kungachaza okuningi. Uma unezibuyekezo eziyinkinga, zizokudonsela ukuthengisa kwakho phansi. Abathengi bathanda izibuyekezo futhi bazisebenzisela ukwenza izinqumo zokuthenga nsuku zonke. Okwakho ukubuyekeza akudingeki ukuthi kube okuphelele, kodwa kufanele zithembeke futhi zibhalwe kahle. Uma unezimbi ezingameleli kahle imikhiqizo noma izinsizakalo zakho, uzofuna ukufika emsebenzini uzicele kumakhasimende akuthandayo.
Nazi izibalo ezinhle kulokhu infographic evela kuDemandforce kuzibuyekezo:
Tags: amandlaUkubuyekezwa okuku-inthanethiIzibuyekezo
Ingabe Isikhundla Sokusesha Komthelela Womphakathi?
Jun 18, 2012 ku-9: 31 PM
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi kuyindlela yomlilo eqinisekile yokubuyisa izinkampani emnyango wokudweba futhi ziphinde zihlole amasu abo wokumaketha. Bona ukuthi yini esebenzayo, ubone ukuthi yini okungasebenzi. Ngicabanga ukuthi abantu badonselwa ukubhala izibuyekezo eziku-inthanethi ngoba sithanda ukwabelana nganoma yini enhle esisanda kuhlangana nayo, noma simane nje sifuna ukuxwayisa abanye ngaphambili uma kuyinto embi. Ihlala ibuyela emuva ngesidingo somuntu sokuxhuma nokwabelana.